၁၃ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသည့်အမျိုးသမီးများ၏အလေ့အကျင့် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B13B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021 Robert Moment အာရအလွတ်, B2B, စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအလွတ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, Gigs Buy & ရောင်းချပါ, Gigs ဝယ်ပါ, တရုတ်အလွတ်, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက်, Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း, ပြင်သစ်အလွတ်တန်း Gigs, အရင်ဖျော်ဖြေ, ရောင်းရန် Gigs, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအွန်လိုင်း, ဟိန်ဒီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, အင်ဒိုနီးရှားအလွတ်တန်း Gigs, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, ပေါ်တူဂီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, Gigs post, ရုရှားအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, Gigs ရောင်းပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင့်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲရောင်းချပါ, B2B အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, လက်ကားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, ဘေးထွက် Gigs, စပိန်အလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, လက်ကား, လက်ကား - B2B, လက်ကား & B2B စျေးကွက်, လက်ကားစျေးကွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
“ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသူတို့၏ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်ထားသည်” -ရောဘတ် Moment, အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုဘဝနည်းပြ
“ မင်းတတ်နိုင်သလောက်စဉ်းစားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းထင်သလောက်မလုပ်နိုင်ရင်မင်းမှန်တယ်” - ဟင်နရီဖို့ဒ်သည်ဤကိုးကားချက်နှင့်အမှန်ပင်မှန်ကန်ခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်မိမိထိရောက်မှုရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်များအပေါ်ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်သည်။ ဒီအယူအဆကိုစိတ်ပညာရှင်အဲလ်ဘတ်ဘန်ဒူရာက ဦး ဆုံးဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ မိမိကိုယ်မိမိထိရောက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထိုစဉ်ကတည်းကသိသိသာသာလေ့လာခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်စွာစွမ်းရည်နှင့်ယုံကြည်နိုင်စွမ်းအားကောင်းသောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို့ရောက်ရှိရန်၊ ကတိက ၀ တ်များနှင့်ရာသီဥတုဖိစီးမှုအခြေအနေများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိရောက်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမြင့်မားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမသည်ကျန်းမာရေးအသစ်ကိုစွဲမြဲနိုင်ကြောင်းသိသောကြောင့်သူမလျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းသည်သူမအတွက်အရည်အချင်းရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသည်ဟုခံစားမိလိမ့်မည် စစ်အစိုးရနှင့်ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်။
သူတို့၏စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏စွမ်းရည်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ တန်ဖိုးများနှင့်ပန်းတိုင်များကိုယုံကြည်မှုရှိကြသည်။
လူများသည်ဘဏ္themselvesာရေးမှအချိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ ရိုးသားမှုနှင့်နယ်နိမိတ်များအပါအ ၀ င်အကျိုးရှိသောဆက်ဆံရေး၏အခြေခံလက္ခဏာများရှိသည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအားလုံးသည်နှစ်လမ်းသွားလမ်းဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးကိုရရှိရန်အတွက်သင်ထည့်သွင်းရမည်။ ခိုင်ခံ့သောအမျိုးသမီးများသည်လုပ်ငန်းခွင်၌စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကိုတည်ဆောက်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုသတင်းအချက်အလက်၊ သူတို့အလုပ်ခွင်တွင်ထူးခြားမှုတစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာသည့်တန်ဖိုးကိုသိကြသည်။
၃။ သူတို့သည်တန်ဖိုးများနှင့်အမြင်များဖြင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြသည်။
တန်ဖိုးများနှင့်ရူပါရုံများသည်လမ်းပြမြေပုံနှင့်တူသည်။ သူတို့မရှိရင်သင်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ဆုံးသွားမယ့်နေရာကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏စံနှုန်းများနှင့်၎င်းတို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သည်။ ၄ င်းတို့၏တန်ဖိုးများသည်သူတို့၏ဘဝ၊ ကဏ္ relationships၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဏ္relationshipsာရေးရည်မှန်းချက်များအပါအ ၀ င်သူတို့၏ဘဝကဏ္ aspects အားလုံးအတွက်သူတို့၏ရူပါရုံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤတန်ဖိုးများသည်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို ဦး ဆောင်သည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင်များကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီအောင်လုပ်ခြင်းသည်အောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေသည်။
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်ယင်းကိုသိကြသည် စစ်မှန်သော စွမ်းအားတော်ကလာတယ်။ အလုပ်သစ်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေအဆင့်အသစ်ဖြင့်စွမ်းအားကိုမပေး။ ၎င်းသည်အတွင်းမှထုတ်လုပ်သည်! သူတို့၏စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏စွမ်းရည်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ တန်ဖိုးများနှင့်ပန်းတိုင်များကိုယုံကြည်မှုရှိကြသည်။ သူတို့၏အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအခွင့်အလမ်းသစ်များရှာဖွေကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကိုထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်အခါအကူအညီတောင်းခြင်းနှင့်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းများကိုမကြောက်ပါ။
အိမ်မှရုံးခန်းအထိဆက်ဆံရေးအားလုံးအတွက်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်ကြီးမားသောနယ်နိမိတ်များချမှတ်ကာပြenfor္ဌာန်းကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကိုလေးစားကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုနားလည်ပြီးသူတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားတတ်လာတယ်။ အချိန်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်များသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုငြင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိသောကြောင့်အမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိရန်၊ သူတို့၏အသားအရေတွင်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသူတို့၏စိတ်ကိုပြောဆိုနိုင်စွမ်းသည်မယိမ်းယိုင်သောယုံကြည်မှုရှိသည်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ပိုများပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့လိုချင်တာကိုပြောနိုင်ပြီးသူတို့လိုချင်တာကိုလိုက်ပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ကြလို့ပါ။ ဤယုံကြည်မှုသည်ပင်ရင်းမဟုတ်ပေ။ ခြွင်းချက်မရှိလက်ခံမှု၊
ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့သည့်အတွေးအခေါ်သည်အခွင့်အရေးသစ်တစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပေးသည်။ ကြောက်လန့်ခြင်းသည်မှားယွင်းသောသက်သေသာဓကဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့သောအတွေးအခေါ်ရှိကြသည်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းခံစားချက်များကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းရမည်ကိုသိရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအစေခံမပေးသောအခါဖယ်ရှားပစ်သည်။ ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အလေ့အထကသူတို့ဘဝကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးတယ်၊ ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့သည့်အတွေးအခေါ်သည်အားကစားသမားများ၊ အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများကျင့်သုံးသည့်အောင်မြင်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စကားများလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်အချည်းနှီးသောခွက်တစ်ခုမှမသွန်းလောင်းနိုင်ပါ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်အခြားသူများအားမပေးမီသူတို့၏ခွက်ကိုဖြည့်ရန်လိုသည်ကိုသိကြသည်။ ဤအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၌ပါ ၀ င်သည်။ သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်ကျန်းမာသောအလေ့အထများကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ၄ င်းတို့၏သာယာဝပြောမှုကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ နံနက်အချိန်၌တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ အာဟာရရှိသောအစားအစာနှင့်လုံလောက်သောအိပ်စက်ခြင်းတို့သည်ဤအမျိုးသမီးများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်သောနည်းများသာဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုပြုခြင်းသည်အနုပညာအတန်းကိုယူခြင်းသို့မဟုတ်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သူတို့အတွက်သာသူတို့နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်သူတို့၏တစ်နေ့တာအချိန်ကိုယူခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုကျင့်သုံးပုံသည်ကွဲပြားခြားနားပုံရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန် ဦး စားပေးသည့်အချက်သည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများကြားတွင်တသမတ်တည်းဖြစ်သည်။
သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများအရကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆက်ဆံရေးသည်သာယာပျော်ရွှင်သောအသက်တာကိုရရှိစေကြောင်းပြသသည်။ အပြုသဘောဆောင်သောခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊ အလုပ်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများသည်ဘဝသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်လူတို့အားပိုမိုပျော်ရွှင်စေရန်သက်သေပြသည်။ စိတ်ရောဂါပြင်းထန်သောအမျိုးသမီးများသည်လူများပိုမိုတွေ့ဆုံခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောစကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်ရှိသူများကိုထောက်ပံ့ရန်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်သတိပြုကြိုးပမ်းအားထုတ်သည်။
လူသားများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌မစုံလင်မှုများရှိပြီးထိုအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းသည်အားနည်းချက်ကိုပြသနိုင်သည့်အားနည်းချက်ကိုပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းစေနိုင်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလုံခြုံစိတ်ချရလွယ်ကူပြီး၊ အားနည်းချက်မှာဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုအားနည်းချက်ကိုသူတို့နားလည်ကြသည်။ ဘယ်သူမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကူအညီတောင်းရန်အလုံအလောက်အားနည်းသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်စုံလင်သောအသွင်သဏ္ဌာန်ထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ထက်သူမလိုအပ်သည့်အကူအညီကို ပို၍ ရနိုင်သည်။
အကူအညီတောင်းရန်အလုံအလောက်အားနည်းသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်စုံလင်သောအသွင်သဏ္ဌာန်ထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ထက်သူမလိုအပ်သည့်အကူအညီကို ပို၍ ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းလင်းပြီးတိကျသောပန်းတိုင်များချမှတ်ခြင်းဖြင့်စားသုံးခြင်းခံရလေ့ရှိသော်လည်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အလုပ်မှသင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဘဝ၌ဤညှိနှိုင်းမှုမဟုတ်သောတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အခြားသူများအားပိုမိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောမိန်းမသည်မိမိ၏လိုအပ်ချက်များကိုသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကလေးများအားဆက်သွယ်နိုင်သည်။
12. သူတို့က SMART ရည်မှန်းချက်များထားကြ၏။
စိတ်ကိုအဆုံးဖြင့်စတင်ခြင်းနှင့် SMART ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ခြင်းသည်သင်သွားလိုသည့်နေရာသို့ရောက်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်! စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်ရည်မှန်းချက်များကိုချမှတ်သောအခါ၎င်းတို့သည်တိကျမှု၊ တိုင်းတာနိုင်မှု၊ အောင်မြင်နိုင်မှု၊ သက်ဆိုင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ရည်ရွယ်ချက်များချမှတ်ရန်ဤခြေရာခံလမ်းဤရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းကြီးများကမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သောဤရည်မှန်းချက်ရေးသည့်စနစ်သည်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပန်းတိုင်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
၁၃။ သူတို့သည်သူတို့၏စံပြဘဝကိုဒီဇိုင်းဆွဲ။ အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုကြသည်။
လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဒီဇိုင်းဟာစကားလုံးတစ်လုံးထက်ပိုပါတယ်။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှင်သန်ရန်သင်၏မဟာဗျူဟာသည်သင်၏တန်ဖိုးများ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူတို့၏စံပြဘဝကိုဒီဇိုင်းဆွဲသူများသည်၎င်း၏ရှုထောင့်တိုင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့၏ဘ ၀ ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အလိုရှိသည်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုပင်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ချစ်သောသူကိုလုပ်သောသူတို့သည်အောင်မြင်ရန်ပိုများပါသည်။ နှင့်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူအခမ်းအနားလာ! သင်၏အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုခြင်းသည်သင်ပန်းတိုင်များရရှိရန်အထောက်အကူပြုပြီးမိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုရှိစေရန် (အလေ့အထ # 1) နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု (အလေ့အကျင့် ၆) ကိုတိုးမြှင့်ရန်သက်သေပြသည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုပြီးပိုမိုမြင့်မားသောပန်းတိုင်အသစ်များသို့ရောက်ရှိရန်၎င်းတို့ကိုတည်ဆောက်သည်။ သူတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့အားတိုးပွားစေပြီးအားဖြည့်ပေးသည်။
သုတေသနပြုချက်အရအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရန် ၂၁ ရက်ကြာကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လိုပါကဤအလေ့အကျင့်များကိုလာမည့် ၂၁ ရက်အတွင်းသင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ထည့်သွင်းပြီးသင်၏ဘဝပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာသည့်အမျိုးသမီးများ၏ဓလေ့ ၁၃ ခုဟူသောစာအုပ်မှကောက်နှုတ်ချက်များ.
အများပိုင်သတင်း အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များ အဝတ် ပျြောရှငျမှု ပျြောရှငျသော စိတ်ရောဂါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း ကိုယ်ပိုင်အကူအညီ မိမိကိုယ်မိမိချစ်ခြင်းမေတ္တာ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း ခိုင်မာတဲ့အမျိုးသမီးတွေ အမြိုးသမီးမြား အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များ
Robert Moment သည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာဘဝနည်းပြ၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနည်းပြနှင့်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဝသောစွန့် ဦး တီထွင်သူစာရေးဆရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောအမျိုးသမီး ၁၃- ဦး ပါ ၀ င်သည်။ ရောဘတ်သည်အမျိုးသမီးစွန့် ဦး တီထွင်သူများအား imposter syndrome ရောဂါကိုမည်သို့ကျော်လွှားနိုင်မည်နည်း၊ အထူးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ အနေအထား၊ မဟာဗျူဟာမြောက်ထွက်ရှိမှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည့်ရလဒ်များအတွက်သူတို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချရန်မည်သို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရမည်ကိုအထူးသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးရန်သင်၏အခမဲ့ ၁၅ မိနစ်မဟာဗျူဟာခေါ်ဆိုမှုအားစီစဉ်ရန်ယခုသူ၏ဆိုက်ကိုယခုသွားပါ။
IRS သည် Paid Sick Leave Credit နှင့် Family Leave Credit နှင့်ပတ်သက်သည့်အမေးအဖြေများကိုအဆင့်မြှင့်သည်